Indlwane eluphahleni kwiziko lembali laseBergamo - I-Airbnb
Indlwane eluphahleni kwiziko lembali laseBergamo
Iflethi yonke sinombuki zindwendwe onguMicaela
UMicaela ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-90% yeendwendwe zakutshanje.
Indawo yokulala ilandela iprothokholi yococeko nococeko olukumgangatho ophezulu ngokomthetho wengingqi kunye nezikhokelo zokhuseleko kunye nezikhokelo zokucoca.
Ilungele izibini, abahambi bodwa kunye nabahambi beshishini. Kwilali eyimbali emazantsi eDolophu ePhezulu, ecaleni kweCarrara Academy eyaziwayo kunye neContemporary Art Gallery (GAMEC). Umbindi wesixeko kumgama wokuhamba, (izikhululo zebhasi kumgama wokuhamba). Kufuphi neendawo zokutyela zodidi kunye neetrattoria ezifikelelekayo.
Ukufudumala kunye nomoya wothando, ugcinwe kwaye uzolile. Igcwele ukukhanya. Ibanzi kwaye isondele ngexesha elinye. Ixhotyiswe ngendawo yasekhitshini epheleleyo kunye nento oyifunayo ukuba ufuna ukupheka ekhaya.
4.91 · Izimvo eziyi-143
Ilali eyimbali ibekwe emazantsi edolophu endala enokufikelelwa kwimizuzu eli-10 ngeenyawo nge-Via Noca. Kwisitrato esifanayo, iPinacoteca kunye neContemporary Art Gallery. Ngaphantsi kwendlu kukho ibha kunye nevenkile yokutyela, isondele kakhulu kwezinye iindawo zokutyela ezisemgangathweni kunye ne-trattorias efikelelekayo.
Umbuki zindwendwe ngu- Micaela
ekhoyo ukwenza iingcebiso kunye nokusabela kwiimfuno zeendwendwe
Inombolo yomthetho: E0078370 C.I.R.:016024-CNI-00149